Saddex Shirkadood Oo Awalba Keeni Jiray Shiidaalka Oo Ka Baxay Heshiiskii Wareejinta Haamaha Shiidaalka Berbera | Saxil News Network
Saddex Shirkadood Oo Awalba Keeni Jiray Shiidaalka Oo Ka Baxay Heshiiskii Wareejinta Haamaha Shiidaalka Berbera
Berbera-( Saxilnews) – Red Sea, HASS iyo Cali Balaq-balaq Petroleum oo ah saddexdii shirkadood ee awalba dalka keeni jiray shidaalka ayaa ka baxay mashruucii ay xukuumadda Madaxwayne Siilaanyo wadatay ee ay ku doonaysay inay haamaha kaydka shidaalka Berbera ku wareejiso shirkado gaar loo leeyahay.
Sida ay ilo mihiim oo u dhuun-daloola arrimahani ay Haatuf u xaqiijiyeen, saddexda shirkadood ayaa shaki wayni ka galay suurta-galnimada in qorshahani noqdo mid midha-dhal ah mustaqbalka dhaw iyo ka fogba, ka dib markii ay xukuumadu saddexdaasi shirkadood ku soo dartay 8 shirkadood oo kale oo macmal ah, isla markaana wareejintii haamaha ku xidhay in dakhligii haamaha ee labada sanadood ee 2016-ka iyo 2017-ka ay shirkaduhu usoo qadimaan xukuumadda.
Fadeexada kale ee soo shaac-baxday ayaa ah mid uu si cad uga dhexmuuqdo wiilka ay madaxtooyadu soddoga u tahay ee Baashe Cawil Morgan, kaas oo markii uu qal-qaalinayey heshiiska wareejinta haamaha saddexdaasi shirkadood kasii qaatay dilaal xaqul-qalin ah oo lacagtiisa laba jeer oo min $450,000 iyo $700,000 lagu kala siiyey.
Hase yeeshee Baashe Cawil Morgan oo xisaab dibadaha uga furan loogu shubay lacagtaasi ayaa diiday inuu saddexdii shirkadood usoo celiyo dilaalkaasi.
Baashe Cawil, Wasiirka Macdanta Xuseen Cabdi Ducaale (Waji-xun) iyo Wasiirka Duulista Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa lagu tilmaamaa saddexda qof ee ugu musuq-maasuqa iyo dhaca badan xukuumaddda Madaxwayne Siilaanyo.